iMac Draịvụ Iweghachite Tutorial
Ẹkeme Naghachi Data si iMac Draịvụ?
Weghachite Data si iMac Draịvụ na 3 Nzọụkwụ
1 Ẹkeme Naghachi Data si iMac Draịvụ?
Hi niile, m nwa ewu wetara ụfọdụ ihe ọṅụṅụ na m iMac na akwụkwọ na-agbajikwa ugbu a. Apụghị m na-amalite iMac ugbu a ma m chọrọ iji weghachite ụfọdụ faịlụ site na ya, nke bụ banyere azụmahịa m. Amaara m na e ga-ụfọdụ ngwọta iji naputa data site na ya ma ọ bụ site na ya ike mbanye. Nwere ike onye na-agwa m otú?
Ị bụ ya mere kechioma n'ihi na ị na-agụ peeji a, nke awade a zuru okè ngwọta maka gị na-egbu mgbu nke. Ekwu okwu banyere ewepụta data si a anuahade ma ọ bụ agbajikwa iMac, i nwere ike iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị ọ bụrụ na ị nwere ọzọ Mac ma ọ bụ Windows na kọmputa na họrọ a ịdabere iMac ike mbanye mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery for Mac Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery maka Windows bụ otu nke kasị mma dị ike na n'ihe ize ndụ-free iMac ike mbanye data mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị iji weghachi data si iMac ike mbanye, n'agbanyeghị gị iMac bụ ike ma ọ bụ gbajiri. Na ya, i nwere ike effortlessly weghachi videos, photos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, ozi ịntanetị na ndị ọzọ ụdị faịlụ gị iMac ike mbanye.
Download ikpe mbipute si n'okpuru na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịmalite iMac ike mbanye data mgbake.
Cheta na: The mkpa a chọrọ nke na-agbake data si a gbajiri iMac bụ na iMac ike mbanye nwere ike iwere na ejikọrọ na ọzọ Mac ma ọ bụ Windows kọmputa. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji a Windows kọmputa ịrụ mgbake, biko hụ faịlụ usoro gị iMac ike mbanye nwere ike ghọtara site na Windows na kọmputa.
2 weghachite Data si iMac Draịvụ na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a ka na-agbalị na-agbake data si ike mbanye nke a gbajiri ma ọ bụ jiri iMac na Wondershare Data Recovery for Mac. Ọ bụrụ na gị iMac ka nwere ike na-arụ ọrụ, ị pụrụ ime mgbake na ya.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ na Malite iMac Draịvụ Iweghachite
Mgbe ejikọta gị iMac ike mbanye ọzọ Mac na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery for Mac, ị pụrụ ịhụ ihe interface dị ka oyiyi n'okpuru. Ị dị nnọọ mkpa iji na-agụ ntụziaka nke dị iche iche mgbake ụdịdị ọma ma họrọ otu mode na-amalite.
Ebe a, i nwere ike iri "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi iMac Draịvụ
Mgbe ahụ, gị iMac ike mbanye ga-ahụrụ site usoro ihe omume, na ị dị nnọọ mkpa iji họrọ aha ya na window na pịa "iṅomi" anya n'ihi na recoverable faịlụ.
Ọ bụrụ na gị iMac ike mbanye e formatted, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Data si iMac Draịvụ
Ka anya dị ka scanning okokụre, usoro ihe omume window ga-depụta niile hụrụ faịlụ na nchekwa. Ị nwere ike ịlele otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji weghachite na mbụ ha aha.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" ma họrọ a nchekwa gị Mac na-azọpụta ha.
Olee otú iyi Music si Mac ka iPhone
Olee otú Play MKV na Mac OS X (Yosemite & Mavericks gụnyere)
> Resource> Mac> iMac Draịvụ Iweghachite - Olee otú naghachi furu efu faịlụ site na Draịvụ on iMac